ကြီးကျယ်ခမ်းနားဆုံးပွဲတော်!! ရာဇဘိသိက်နန်းတက်ပွဲတော်ကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့့်် ထိုင်းအစိုးရမှ နိုင်ငံတ၀ှမ်း ၇ ရက်တာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပ – Myanmar Live
Entertainment / ခရီးသွား / ထိုင်း / ဘန်ကောက်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက် / လူနေမှုပုံစံ / သတင်းများ / မြန်မာ
ကြီးကျယ်ခမ်းနားဆုံးပွဲတော်!! ရာဇဘိသိက်နန်းတက်ပွဲတော်ကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့့်် ထိုင်းအစိုးရမှ နိုင်ငံတ၀ှမ်း ၇ ရက်တာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပ
May 22, 2019 May 23, 2019 - by BB
ထိုင်းဒဿမရာမမင်းဆက် ၀ဇီရ လောင်ကွန်း၏ရာဇဘိသိက်နန်းတက်ပွဲတော်ကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေ ဖြင့်ထိုင်းအစိုးရမှမြို့တော်ဘန်ကောက်နှင့်ခရိုင်အားလုံးတွင် မေလ ၂၂ ရက်မှ ၂၈ ရက်ထိ ၇ ရက်ကြာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကျင်းပမည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို မေလ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခွဲအချိန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြို့တော်ဘန်ကောက်အနေဖြင့် စနာမ်းမလွန်း (ပြည်သူ့ရင်ပြင်)တွင် ဗဟိုမဏ္ဍအဖြစ်ကျင်းပမည်ဖြစ်သလို ညနေ ၆ နာရီခွဲအချိန်မှ ည ၉ နာရီခွဲအချိန်ထိ ၇ ရက်ဆက်တိုက် ကျင်းပသွားမည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်သဘင်များမှာထိုင်းရာမဇာတ်(Khon)၊တီးဝိုင်း နှင့်နိုင်ငံ ကျော်အနုပညာရှင်များပါဝင်သရုပ်ထားသည့်တေးသရုပ်ဖော်ပြဇာတ်များဖြစ်သည်။
လက်မ လွတ်သင့် သည့် အစီအစဉ်မှာမေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့်နိုင်ငံတကာသဘင်အနုပညာပွဲတော် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၀ နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှသဘင်အဖွဲ့များလာရောက်ဖျော် ဖြေမည်။
တရားရုံးချုပ်အဆောက်အအုံဘက်နှင့်ဓမ္မသတ်တက္ကသိုလ်ဘက်တွင်လည်းမဏ္ဍပ်ခွဲ ၂ ခုစီစဉ်ကျင်းပ မည်ဖြစ်ပြီး ညနေ ၅ နာရီခွဲမှ ည ၆ နာရီခွဲအချိန်ထိ ထိုင်းရိုးရာသဘင်အနုပညာမြောက်များစွာဖြင့် ဖျော်ဖြေသွားမည် နယ်ဒေသများတွင်လည်း မေလ ၂၂ ရက်နေ့မှစပြီး ခရိုင်အသီးသီးတွင် ဒေသခံ ရိုးရာအနုပညာများဖြင့်ဖျော်ဖြေကြမည် ပွဲတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုသူများသည်အ၀ါ ရောင်အင်္ကျီဖြင့်ယဉ်ကျေးစွာဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သလို အမျိုးသမီးများအနေနှင့်ဒူးခေါင်းအောက်ရှည် သည့်စကတ်များကိုသာဝတ်ဆင်နိုင်မည်။
ပွဲတော်အတွင်းသို့ဝင်ပေါက် ၂ နေရာဖွင့်ပေးထားပြီးပြည်သူ့ရင်ပြင်၏မြောက်ဘက်ရှိတရားရုံးချုပ်အ ဆောက်အအုံဘက်ဝင်ပေါက်နှင့်ဓမ္မသတ်တက္ကသိုလ်ဘက်ဝင်ပေါင်များမှဝင်ရောက်နိုင်သည် ပွဲတော် အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူမည့်ပြည်သူများသည်သံသတ္တုနှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများစစ်ဆေးသည့်ဂိတ်ပေါက်နှစ်ခုကိုကျော်လွန်ပြီးလျှင်လက်ကောက်ဝတ်တွင်အမှတ်အသားရိုက်နှိပ်ခြင်းခံယူပြီး ပါက တာဝန်ရှိသူမှနေရာချပေးမည်။
ထို့အပြင် ပွဲတော်ကျင်းပလျှက်ရှိ်သည့် ၇ ရက်တာလုံးတွင် ည ၇ နာရီအချိန်မှစပြီးပြည်သူ့ရင်ပြင် ၌မီးသီးပေါင်းသောင်းချီဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည့်သစ်ပင်နှင့်ပန်းဥယျာဉ်ကိုပါပြသမည် ည ၉ နာရီခွဲမှ ည ၁၁ နာရီအချိန်တွင် မီတာ ၄၀ အမြင့်ရှိရေပန်းကိုလည်းရောင်စုံမီးများနှင့်အတူ နန်းတော်၏ နောက်ခံမြင်ကွင်းပုံစံဖြင့်ခင်းကျင်းပြသမည်။
အချက်အလက်နှင့်ဓါတ်ပုံများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : www.prachachat.net, travel.mthai.com
TaggedMyanmarMyanmar live newsMyanmar newsMyanmarliveThailand
Previous Article နုပျိုနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းက မိသားစုကပေးတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုပြီး အဆိုတော်ဟဲလေးဖွင့်ဟ
Next Article မြန်မာအကျဉ်းသား ၅၉ ဦးလွတ်မြောက်!! တော်ဝင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိ